Kusukela kuDana Borisova umyeni ubalekele kanye ne "Mercedes"
Futhi unyaka awuzange udlule kusukela kulolo suku olujabulisayo, lapho umethuli we-TV uDana Borisova ashada no-Andrei Troshchenko. Kubonakala sengathi inkanyezi ye-TV yagcina ithola injabulo yangempela. Namuhla kwaziwa ukuthi uBorisova ufaka isicelo sokuhlukanisa.
Izindaba zakamuva zanikezwa i-portal yolwazi "StarHit". Kuvela ukuthi u-Andrei Troshchenko washiya uDana emasontweni amathathu edlule. Ngokusho komngane we-TV ummemezeli, indoda engekho umkakhe iqoqe izinto zakhe, yahlala "eMercedes" eBorisova futhi yashiya. Ngaso sonke isikhathi, uDana akakwazanga ukuxhumana nomyeni wakhe. Esikhathini esizayo esiseduze, owesifazane uzofaka isicelo sehlukaniso, kanti ngenkathi esebhale isitatimende emaphoyiseni mayelana nokubiwa kwezimoto.
Ngokuncane umyeni ka-Diana Borisova uyaziwa. U-Andrei Troshchenko eminyakeni eyisishiyagalombili edlule weza enhloko-dolobha yaseRussia esuka eLugansk. Ngokusho komdumo, le ndoda yayingene ebhizinisini (noma kunjalo, ayaziwa kanjani). Kodwa-ke, umethuli we-TV oneminyaka engu-39 ubudala ufanelwe konke okusemkhwenyana:
... bekuyoba okunengqondo uma ngimemezela umshado oligarch osekhulile, kodwa ngakhetha indoda enomusa, enhle, ohlakaniphile futhi ohloniphekile owayefuna iminyaka engama-39 futhi engifuna ukuhlala naye kuze kube sekupheleni kosuku
Ngemuva komshado, ubuhlobo nomyeni wakhe bebuhle. UDana wayejabule ngokuthi okhethiwe wakhe uthole ulimi oluvamile nendodakazi yakhe eneminyaka engu-10 ubudala. Ngokusho komngani uBorisova, ubudlelwane behle kakhulu ezinyangeni ezimbili zokugcina: lo mbhangqwana wawuphikisana ngezikhathi ezihlukahlukene.
I-Grigory Leps yavula isitolo sakhe sokuqala se-intanethi
Imidiya ikhala i-alamu: U-Angelina Jolie uyagula ngokubulala
U-Alexei Panin uthumele uMaxim Galkin emnyama, ividiyo
UStas Pieha wahlukana nomkakhe
Buzova elahlekelwa yilapho esiteshini, ividiyo
ULarisa Kopenkina waphawula ngokuhlangana kwakhe noProkhor Shalyapin
U-Ksenia Sobchak wabika ukuthi yiziphi izimali ezihlonishwayo ezitholakala "emshadweni wegolide"
Indlela yokwenza ibhokisi lephepha ngezandla zakho
Isibindi nama-apula ku-sauce esiphundu newayini elimuncu
Izitayela zezimfashini zezicathulo zamadoda - entwasahlobo-ehlobo 2016
Iziphi izicathulo okufanele ngizikhethele amantombazane amancane?
Uhlobo lwakho lomdwebo nomdanso ozokusiza ukuthi ulahlekelwe isisindo
Ukwesaba indoda phambi komfazi
I-Strawberry cocktail ne-basil
Impilo yabesifazane emva kweminyaka engama-40
Indlela yokukhetha ifomula lomntwana
Ukuziphatha komuntu oshadile ngemuva kweminyaka engamashumi amane
Isitshalo se-Asparagus esitshala endlini
Isaladi nenkukhu nama-walnuts. Ukupheka kwetafula lonyaka omusha
Umthelela we-aromas emzimbeni womuntu
Amaphikishi: izitsha ezivela kuma-courgettes